No Comments on यी नै रहेछन १ तोला सुनको लागि वृद्ध महिलाको कानको लोती का’ट्ने
No Comments on रोजिना गिरीको ह,त्याकि आ,त्महत्या ? श्रीमान बिदेशमा माइतिको यस्तो आ,रोप,यस्तो भनेकी रहिछिन रोजिनाले-भिडियो सहित
मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरकी २१ वर्षीय रोजिना गिरी (काफ्ले) को मृ,त्यु भएको तीन दिनसम्म पनि पो,स्टमार्टम हुन सकेको छैन । आइतबार बिहान सात बजे आफ्नै घरको कोठामा मृ,त भेटिएकी रोजिनाको श,व सोही दिन लगिएको भएपनि दुई परिवारबीचको द्व,न्द्वका कारण पो,स्टमार्टम हुन नसकेको हो ।
आइतबार वडाध्यक्ष खेमप्रसाद न्यौपाने र प्रहरीको समन्वयमा रोजिनाको श,व पो,स्टमार्टमका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइएको थियो । माइती पक्षले शव उठा,उन नदिने अडान राख्दाराख्दै पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधिको चर्को दबा,बका कारण पो,स्टमार्टमका लागि धरान लगेको पी,डितका आफन्तको दा,बी छ । तर अहिलेसम्म पो,स्टमार्टम नहुनुले आ,शङ्का उत्पन्न गराएको मृ,तककी सानिमा रमिला गिरी बताउँछिन् ।
‘सोमबार नै प्रहरी प्रशासनले पो,स्टमार्टमको तयारी गरेको थियो तर पछि रोजिनाका घरपट्टीका मान्छे फेला पार्न नसकेको भन्दै पो,स्टमार्टम गरेन’, उनले भनिन्, ‘रोजिनाको मृ,त्यु भएपछि नै घरपट्टीका सबै प्रहरी सुर,क्षामा थिए । प्रहरीले कसरी प,क्राउ गर्न सकेन ? २४ घण्टाभित्र गरिसक्नुपर्ने पो,स्टमार्टम अहिलेसम्म नहुँदा श,ङ्का उब्जि,एको छ । ’
No Comments on जब ८ कक्षा मात्र पढेका श्रीमानले डिग्री पढेको श्रीमतीलाई बनाए सोच्नै न सक्ने हालत
मानवाधिकार समूहद्धारा आजीवन कारावासको माग
उ सारै नै राक्षस बन्यो । सारै ईर्ष्या गर्दथ्यो । किनकी उ केवल ८ कक्षा पासको मात्र शिक्षा लिएको थियो । श्रीमतीले उच्च शिक्षा लिएको हेर्न चाहादैन थियो । उस्तो भयावह घटना जसले सबैलाई स्तव्ध बनाउँछ । यसैले उसलाई आजीवन कारावासमा राख्न मानवअधिकारवादी समुहले भनेको छ । उसलाई अब जेलबाट बाहिर कहिलै आउन दिनुहुन्न उनीहरुको माग छ ।
यो घटनाकी पिडित अख्टर हुन् । उनी अहिले झनै संघर्षशील बनेकी छिन् । दाहिने हातका औला नभएपछि अहिले उनी देब्रे हातले देख्न अभ्यास गरिरहेकी छिन् । उनी देब्रे हातले लेख्ने अभ्यासमा चाँडै पोख्त भएकी छिन् । उनले पढाई फेरी सूरु गरेकी छिन् । जसरीपनि मास्टर डिग्री हासिल गर्ने र सरकारको उच्च ओहोदामा जागिर खाने उनको लक्ष्य जसरी नी पुरा गर्ने कार्यमा मेहनत गरिरहेकी छिन् । अहिले उनी आफ्ना माता–पिताका घरमा फिर्ता गएकी छिन् ।
No Comments on अन्त्यष्टिका लागि चितामा सुताइएका मलिक आगो लगाउने बेलामा जुरुक्क उठेर बसेपछि…
No Comments on रोल्पामा २ वर्षकी छोरी बोकेर हिँड्दै गरेकी आमा भीरबाट खसिन्, २ जनाकै मृत्यु
काठमाडौ । काखे छोरीलाई बोकेर हिँड्दै गर्दा रोल्पामा भीरबाट खसेर आमा छोरीको मृत्यु भएको छ । बाँदर लखेटेर घर फर्कँदै गर्दा रोल्पा नगरपालिका–९ हाङबाङ बस्ने २५ वर्षीया संगिता पुन २ वर्षकी छोरी सहित खसेकी हुन् । संगीता र उनकी २ वर्षीया छोरी कृतिका पुनको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीकाअनुसार घरबाट करिब १ सय ५० मिटर टाढा रहेको बारीमा रोपेको मकै बाँरवाट जोगाउन गएकी उनी फर्कदा दुर्घटना भएको हो । उनी काम सकेर घर फर्कदै थिइन् । घटनाका बिषयमा थप अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यता बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–१ खडैचाका एक बृद्धको शव तलाउमा फेला परेका छन् । डुडुवा १ बस्ने ८५ वर्षीय नन्कौ अहिर राप्तीसोनारी–६ भुरीडाँडा जंगलको तलाउमा मृ त्त अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
घरबाट मालपोत कार्यालय नेपालगञ्ज जान्छु भनि हिँडेका उनी घर परिवारको सम्पर्कमा आएका थिएनन् । उनको शव तलाउमा फेला परेपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान शुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।
सप्तरीमा सुतीरहेकै बेला मुखवाट फिज आएको देखेपछि दिदी-भाईलाई परिवारले अस्पताल लगे, तत्कालै भयो मृत्यु
No Comments on सप्तरीमा सुतीरहेकै बेला मुखवाट फिज आएको देखेपछि दिदी-भाईलाई परिवारले अस्पताल लगे, तत्कालै भयो मृत्यु
काठमाडौ । वर्षायाममा तराईमा स र्पको विगबिगी हुन्छ । स र्पका कारण धेरै ब्यक्तिले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सप्तरीमा एकै घरका दिदी भाईको निधन भएको छ । उपचारका क्रममा अस्पताल लैजादै गर्दा उनीहरुको निधन भएको हो ।
खडक नगरपालिका–२ बेल्हीका १४ वर्षीया सुनिता मण्डल र उनका नौ वर्षीय भाई कृष्ण मण्डलको निधन भएको हो । घरमा सुतिरहेकै अवस्थामा दुवै जनालाई स र्पले ड सेको हो। उनीहरूको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै निधन भएको वडाध्यक्ष रामअवतार साहले जानकारी दिए। राति सुतेको अवस्थामा दुवैको मु खबाट फि ज आएको देखेपछि परिवारका सदस्यहरूले उपचारका लागि अस्पताल लगेका थिए।
यो अर्को समाचार, पहिरोले गुल्मीमा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ। रेसुंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ तम्घास थुम्का लाइनका तिलक परियारको घर पहिरोले पुरिएको हो।
पहिरोले घर पुरिँदा तिलककी तीन छोरीको मृत्यु भएको छ। २१ वर्षकी भावना परियार, १४ वर्षकी गंगा परियार र जमुना परियारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गंगा(जमुना जुम्ल्याहा हुन्। घटनास्थलमा स्थानीय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शशस्त्र प्रहरी पुगिसकेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरूषोत्तम पाण्डेले घरमुली तिलक, उनकी श्रीमती र अर्की एक छोरी भने सुरक्षित रहेको बताए।
यीनै हुन ३ दिदिबहिनि जसले गए रातिको पहिरो’मा ज्या’न गु’माए
No Comments on यीनै हुन ३ दिदिबहिनि जसले गए रातिको पहिरो’मा ज्या’न गु’माए
राती करिब १ बजे घरमाथिबाट पहिरो आई घर भ’त्कि’दा एउटै कोठामा सुतिरहेका तीनै जना’को पु’रिएर मृ’त्यु भएको र पुरि’एको ला’श स्थानीय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले निकाले’को प्रहरीले जनाएको छ ।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
७८ वर्षिया बृद्धा मालपोतको लाइनमा बसेकी थिईन, गर्मि’ले भिड’मा बे’होस भएर मृ’त्यु
No Comments on ७८ वर्षिया बृद्धा मालपोतको लाइनमा बसेकी थिईन, गर्मि’ले भिड’मा बे’होस भएर मृ’त्यु
हेटौंडा, । मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन लाइन लागेकी एक वृद्धा महिला बे’ हो स भएर ल’ ड्दा मृ’ त्यु भए’को छ ।मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नंबर ६ सामरी घर भएकी ७८ वर्षिया पञ्चमाया गौतमको आज मालपोत परिसर’मै ज्या’न गए’को हो ।लाइनमा बस्दाबस्दै उनी ए’क्कासी ढ’लेकी थिइन् । उन’को मृ’त शरी’र’लाई निकै समय मालपोत कार्यालय परिसरमै राखिएको थियो ।
कर्मचारीले मोठ भि’डाउने क्रममा आवश्यक पर्ने भन्दै शा’रीरिक रुपमा बृद्ध महिलालाई लाइनमै बस्न भनेका थिए ।कर्मचारीले शा’रीरिक रुपमा अ’ श क्त रहेपनि काम चाँडो गर्नु भन्दा गर्मिको समयमा भीडमा राख्दा उनि बे’ हो स भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
लेखापढी व्यवसायी मार्फत काम थालिएको भएपनि उनी बिहानैदेखि लाइनमा रहेको सेवाग्राहीले बताए । व्यवस्थापकीय कमजोरी का कारण घ’ट ना भएको कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भण्डारीले बताए ।